Harry Skelton: Achọpụta Ememme Punchestown - cheapinternetsecuritysoftware.com
Ọhụrụ websiten’ịbụ onye chiri 2020/21 onye mmeri Bound Jockey, onye nnọchi anya egwuregwu Grosvenor Sport Harry Skelton na-aga Ireland maka 2021 Punchestown Festival – ọ ga-abụrịrị onye mgbape.
Agbanyeghị na Ememme Cheltenham emechaghị atụmatụ maka Skeltons, ha nwere otu nnukwu ọkwa 1 na-atụ anya ebe an’ụdị Nube Negra. Onye nwere mmụọ nke abụọ na Prestbury Park, Harry na-enwe olileanya na ọ ga-aga nke ọma karịa otu ọnwa gara aga na Champion Chase that a megide Allaho na Chacun Pour Soi.
Ọtụtụ kpakpando nke Cheltenham ga-arụ ọrụ dịka Honeysuckle, Gold Cup na-emeri Minella Indo, Monkfish na Envoi Allen na-atụ anya isi na isi. Anyị nwere ike ịga n’ihu.
Grosvenor Sport nwere ịkụ nzọ dị na Punchestown – yabụ lelee ahịa ante-post ma lebe anya maka ọpụrụiche pụrụ iche na agbụrụ agbụrụ na izu.
Tags:Achọpụta Ememme Harry Punchestown Skelton
Kedu izu ụka. Premier League, Njikọ FA Cup, Asọmpi Egwuregwu. …
Etu esi egwu ndu Blackjack Blackjack
Blackjack bụ otu n’ime ihe kachasị cha cha egwuregwu egwuregwu …